पाथीभरा पुगेका नेता पौडेलले भने : भगवानले सबैको कल्याण गरून् ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पाथीभरा पुगेका नेता पौडेलले भने : भगवानले सबैको कल्याण गरून् !
पाथीभरा पुगेका नेता पौडेलले भने : भगवानले सबैको कल्याण गरून् !
२९ मंसिर काठमाडौं/ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजका लागि बोलाइएको भए पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरु भने उपस्थित भएनन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा संस्थापन पक्षका नेताहरुको बैठक बसिरहेको छ ।
तर वरिष्ठ नेता पौडेल भने तिर्थ यात्राका लागि पाथीभरा पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राख्दै नेता पौडेलले लेखेका छन्, ‘सुप्रसिद्द तिर्थ धाम पाथीभरा देविको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । भगवानले सबैको कल्याण गरून् ।”
गत शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा पौडेल पक्षधर नेताहरु अनुपस्थित भएपनि बैठक आजलाई सारिएको थियो । तर नेता पौडेल भने त्यसमा सहभागी नहुने भन्दै पाथिभरा पुगेका थिए ।
आफ्ना मागहरु सभापतिले सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि नबढेको तथा पार्टीलाई एकलौटी ढंगले अघि बढाउन खोजेको भन्दै बरिष्ठ नेता पौडलले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
पौडेललाई मनाउन देउवा सक्रिय भएका थिए । देउवा हिजो (शनिबार) दिउँसो पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए । उपसभापति बिमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरु बोहराटारमा एकघण्टा भन्दाढी समय बसेर छलफल गरेपनि सहमति भने जुट्न सकेन ।
पौडेलले १४ औ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएपनि बैठकको एजेन्डामा १४ औं महाधिवेशनको विषय समावेश नगरेकाले बैठकमा सहभागि नहुने नेता पौडेलले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण
काेराेना भाइरस : ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या १ सय ७० पुग्याे, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
अस्ट्रेलिया काण्डको यथार्थ बल्ल भयो प्रदाफास, कुरा यस्तो रहेछ !
अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ उकालो लाग्यो, कुन देशको कति ?